Muxuu Turkiga ugu tababbaraayaa dalkiisa?
Wasaaradda gaashaandhigga Turkiga ayaa soo saartay bayaan la xiriira tababarka gaarka ah ee 150 askari oo Soomaali ah loogu tababaray dalka gudihiisa, maadaama khibradooda ay qeyb ka tahay heshiis ay wada gaareen labada dowladood, sida lagu sheegay warbixinta.
Ciidamada ayaa tababar qaas ah la qaadanaya Ciidamada Kumandooska, wuxuuna tababarku soo bilowday 21-kii bishii Diseembar ee sanadka 2020. Waxay hadda si joogto ah ugu diyaargaroobayaan cashadooda iyo jimicsi xaruntooda ah.
“Waxaan mudnaanta siineynaa tababbarka ciidamada kumaandooska ee 150-ka askari ee ku sugan dalka Turkiga lagana soo xulay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, tababarkuna wuxuu bilaabmay 21-kii bishii Diseembar ee sanadka 2020-ka”. Sidaana waxaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Wasaaradda Difaaca Qaranka Turkiga.
Tababarka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa ka socda xarunta tababarka ee la dagaalanka argagixisada oo ku taal gobolka Isparta ee koonfur galbeed ee dalka Turkiga, sida lagu sheegay qoraalka.
Safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya Mehmet Yilmay ayaa sheegay bishii Ogos ee sanadka 2020 in dowladiisa ay qorsheyneyso in ay ku darsato 15,000 ilaa 16,000 oo ka mid ah ciidamada xooga dalka Soomaaliya, wuxuuna balan qaaday in uu siin doono tababar iyo taageero seddexaad.
Xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya wuxuu ku bilaabmay gargaar loo fidinayay dadkii ay saameeyeen abaarihii ku dhuftay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya sanadkii 2011, markaas oo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu yimid Soomaaliya.
Intaa wixii ka dambeeyay Xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga wax weyn buu iska bedelay, maadaama Shirkadaha Turkiga ay la wareegeen ilihii dhaqaalaha ee dalka, sida Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde iyo Dekedda Muqdisho, waxayna dhiseen Isbitaalo, Wadooyin, waxayna bilaabeen Turkish Airlines. halka waxbarashadda & tababarka ciidanka lagu daray.
Xigasho: Wakaalada Anadolu / Axadle.
Hordhaca: Athletic Bilbao vs Barcelona – Koeman Oo
Somali police spokesperson survives bomb explosion in